၂.၃။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုအင်တာဗျူးများ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ - Investigative Journalism Manual
သင့်ရည်ရွယ်ချက်က သတင်းရဖို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ စကားနိုင်လုရန် မဟုတ်ပါ။ လိုသလောက် အချိန်ယူကာ အေးဆေးတည်ငြိမ်သည့် အသွင်ပြင်ဖြင့် ပြုမူပါ။ အင်တာဗျူးများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အဖြေများကိုသာ ရရှိရန်ဖြစ်ရာ သင်မေးခွန်းများသည် ထိုရည်ရွယ်ချက်များကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမည့် နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ မျက်ခုံးပင့်ခြင်း၊ ပခုံးတွန့်ခြင်း၊ ပြုံးပြခြင်း စသည့် သင့်ခံစားချက်ကို လှစ်ဟပြသည့် သင်္ကေတများကို သင့်သတင်းရင်းမြစ်က သတိထားမိပါလိမ့်မည်။ သင်သည် လူသားတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အလျောက် ထိုသင်္ကေတများသည်ပင် သင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရုပ်မြင်သံကြားတွင်လည်း ရုပ်သေကြီးကို ကြာမြင့်စွာကြည့်နေရခြင်းက ငြီးငွေ့စရာပင်။ သို့သော် သူ့စည်းသူ့ဘောင်နှင့် ရှိသည်ကိုတော့ သတိထားရပေမည်။ မိမိဘက်မှ အချို့ခံစားချက်များကို ဖုံးဖိမထားနိုင်ပါလျှင် သတင်းရင်းမြစ်က သူ့စကားများကို စိစစ်အကဲဖြတ်နေသည်ဟု ခံစားရကာ သူ့တုံ့ပြန်မှုများတွင်လည်း လျှို့ဝှက်ဖုံးဖိထားသည်များ ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ခံစားချက်ကို နှိုးဆွပေးခြင်းအားဖြင့် ရုတ်တရက် အခြေအတင် စကားအငြင်းအခုံများသို့လည်းကောင်း၊ အကျိုးမဲ့ အချည်းနှီး ထပြန်သွားခြင်းဆီသို့လည်းကောင်း ဦးတည်သွားနိုင်ပါသည်။ သင့်စိတ်မကျေနပ်မှုကို ဖော်ထုတ်မိသည်နှင့် ဆိုးရွားသူတစ်ဦးအနေဖြင့် မသင့်တော်သည်ကို လုပ်မိရာ ကျပါသည်။ အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာသည့် တုံ့ပြန်မှုများမှလွဲ၍ တမင်တကာ စကားတုံ့ပြန်ခြင်းမျိုး မပြုမိစေရန် သတိထားပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က ငြင်းခုံစရာတစ်ခုကို စတင်လာခြင်းသည် သင့်မေးခွန်းကို မဖြေဘဲနေနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုလည်း သတိရပါ။
ဝေ့လည်လည်ဖြစ်နေသည့် သင့်မေးခွန်းများထက် သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဖြေများက ပို၍အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ပြောဆိုခြင်း၊ ကြားဖြတ်ပြောဆိုခြင်း မပြုပါနှင့်။ အတွေ့အကြုံရှိသော နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးသည် အင်တာဗျူးများ ရာထောင်ချီ၍ ဖြေဆိုဖူးပါလိမ့်မည်။ သူတို့၏ အချိန်က တန်ဖိုးရှိပါသည်။ သင့်မေးခွန်းကို သူတို့ ရှောင်လိုပါက ရှောင်၍ဖြေသွားပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုင်တွယ်နေရသည့် ပြဿနာများကို သင်က အောင်အောင်မြင်မြင် ဖော်ထုတ်နိုင်လိုက်ခြင်းကြောင့် သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ရာထူး၊ ငွေကြေးနှင့် ရံဖန်ရံခါ သူတို့၏ အသက်မွေးမှုများကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါသည်။ အခြေအနေကိုရော လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါ ဂရုတစိုက် အကဲခတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်က ခပ်ဖော့ဖော့ဖြင့် ကွေ့ပတ်မေးသည်ကို သူနားလည်ပုံ မရပါက တည့်တည့်ပင် မေးလိုက်ပါ။ အကယ်၍ သူတို့၏ အဖြေများက နားလည်ရမလွယ်လျှင် သင့်မေးခွန်းကို ပြန်ချောကာ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မေးကြည့်ပါ။ အချို့သတင်းရင်းမြစ်များသည် သူတို့အတွေးများကို အစီအစဉ်ပြန်ချကာ ပြန်လည်ဖြေဆိုရမည်ကို ကျေနပ်ကြပါသည်။ တုံ့ပြန်ဖြေဆိုမှုသည် သင့်မေးခွန်းကို အဖြေပေးနိုင် မပေးနိုင် သေချာနားထောင်ပါ။ အကယ်၍ အဖြေမပေးနိုင်ပါက နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါသည်။ သင့်သတင်းရင်းမြစ်က ပြောဆိုသည့်အချက်ကို သေချာသိရှိနိုင်ရန် သူ့အဖြေအတိုင်း (“ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျား/ရှင် ပြောတာက …. ပေါ့ ဟုတ်လား” စသဖြင့်) သူတို့ကို ပြန်ပြောပြကြည့်ပါ။
အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူသည် အတိအကျ အဖြေမပေးလိုပါက “မကြာခင်တုန်းက”၊ “နည်းနည်း”၊ “အများကြီး” သို့မဟုတ် “လုပ်မိလုပ်ရာ” စသည့်စကားလုံးများကို သုံးလာနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ပိုမိုတိကျသည့် အဖြေကိုရရှိရန် နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းအဖြစ် “ဘယ်တုန်းကလဲ”၊ “ဘယ်လောက်များလဲ”၊ “အရေအတွက်ကို ခန့်မှန်းပြောပြပေးလို့ ရမလား”၊ သို့မဟုတ် “ဘာလုပ်မိလိုက်တာလဲ” စသဖြင့် အသေးစိတ် ပြန်လည်မေးမြန်းပါ။
အပိတ်မေးခွန်းများတွင်လည်း အလားတူပင် ကြုံရနိုင်ပါသည်။ မေးခွန်းပြီးသွားသည်နှင့် အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသူက “အင်း” သို့မဟုတ် “ဟင့်အင်း” ဟူသည့် အဖြေလောက်သာ ထွက်လာတတ်သည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် ထိုထက်ပို၍ အချက်အလက် သိရှိလိုသည့်အခါ အဖွင့်မေးခွန်းဖြင့် ပြန်၍ မေးကြည့်ရမည်။
သင်။ ။ ခင်ဗျား/ရှင်က စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာလား။
အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့
သင်။ ။ အဲဒီတုန်းက ဘယ်လိုကြောင့် ထိုးဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာလေးကို ပြန်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
ရှေ့မေးခွန်းတစ်ခု ဆက်မမေးခင် အဖြေတစ်ခုချင်းစီကို သေချာစွာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ အင်တာဗျူး ဖြေသည်ကို ကျွမ်းကျင်နေသူများသည် သင်ကြားလိုသိလိုသည့် အဖြေများကို ပေးတတ်ကြသည်။ သို့သော် သင့်မှတ်စုကို ပြန်ဖတ်ကြည့်သောအခါ သင့်မေးခွန်းကို ကွေ့ပတ်ရှောင်ရှားသွားသည်ကို တွေ့ရနိုင်သည်။
သင်။ ။ …. ခရိုင်က ဆေးခန်းကို ဆေးဝါးတွေ ပို့ပေးဖူးပါသလား။
အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသူ။ ။ ဘယ်ဆေးခန်းကို ပို့ပို့ လိုက်နာစရာရှိတဲ့စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်း လုပ်ရတာပါပဲလေ။
ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် ဟုတ်သည်ဟု ဖြေလိုက်သည်ဟု ထင်ရပါသည်။ သို့သော် သင်သိလိုသော အချက်အလက်ကို သူက ဖြေဆိုခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ထိုအခါ “ဘာဆေးဝါးတွေ ပို့ပေးရတာလဲ”၊ “ဘယ်ရက်က ပို့ခဲ့ရတာလဲ”၊ “အဲသလို ပို့ခဲ့တဲ့အကြောင်း သူတို့ဘက်က ဘယ်လို အတည်ပြုချက်တွေ ရခဲ့သေးလဲ”၊ “အဲဒီဆေးဝါးတွေ ရောက်သွားတဲ့အကြောင်း အတည်ပြုချက် တစ်ခုခု ရခဲ့တာရှိလား” စသည့်မေးခွန်းမျိုးကို ဆက်မေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သတင်းရင်းမြစ်၏ အဖြေကို နားမလည်လျှင် နားမလည်ကြောင်း ပြောပါ။ ဝန်ခံလိုက်ခြင်းက ရှက်ရှက်နှင့် နားလည်ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ရခြင်းထက် များစွာပိုကောင်းပါသည်။ “ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်သူတွေ၊ ရုပ်သံကြည့်တဲ့သူတွေက နားလည်ပါ့မလားမသိဘူး၊ ဒီထက်ပိုပြီးလွယ်အောင် ထပ်ရှင်းပြပေးပါလား” ဟူ၍ ပြန်မေးနိုင်ပါသည်။ “ကျွန်တော်/ကျွန်မ နားလည်တာ မှန်တယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီးပြောခဲ့တာက …. ပေါ့နော်။ အဲသလို ဟုတ်သလား” ဟူသော အဖြေပြန်ကောက်နည်းကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အင်တာဗျူးနေစဉ်အတွင်း ဖြေဆိုသူက မျှော်လင့်မထားသည့်တစ်ခုခု ပြောဆိုလာလျှင် ကိုးကားနိုင်ရန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ စာရွက်စာတမ်း၊ လေ့လာချက် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများကို မိတ္တူများရှိထားပါစေ။ သင့်အသံဖမ်းစက်နှင့် သင့်ဦးနှောက်တို့ကို အချိတ်အဆက်မိမိ အလုပ်လုပ်ပါစေ။ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု ပြီးဆုံးသည့်နောက်တွင်ပင် ဖြစ်စဉ်များအားလုံးကို အသံဖမ်းသကဲ့သို့ မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပြီးသား ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆီလျော်မှုရှိပါက အင်တာဗျူးပြီးဆုံးသည့်နောက်တွင် နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများ မေးရန်ခွင့်တောင်းပါ။
သင်က အင်တာဗျူးလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ပြောဆိုနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ရန်သာဖြစ်ပြီး ဆရာကြီးအလုပ်ခံရရန် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က “ဒါကတော့ အင်မတန် အမြင်ရှိတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ” ဟုဆိုလိုက်လျှင် သင့်ထံက စကားတုံ့စကားလှယ်ကို လိုချင်၍ မဟုတ်ပါ။ ထိုမေးခွန်းကို ဖြေဆိုရန် စက္ကန့်အနည်းငယ်ပို၍ စဉ်းစားရမည်ဟု သင့်ကို စကားဦးသန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု အင်တာဗျူးပြီးသည့်အခါတွင် သတင်းရင်းမြစ်ကို အသက်ရှူချောင်စေရန် အခွင့်အရေးပေးရပါမည်။ ထိုသို့ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထပ်တိုးစိတ်ကူးသစ်များကို ရရှိလာနိုင်သည်။ ထို့နောက် သူက သင့်အားမေးမြန်းလိုသည့် ကိစ္စများ ရှိမရှိ ပြန်လည်းမေးမြန်းပါ။ ယင်းသည် ယဉ်ကျေးမှုလောကဝတ်ပြုခြင်း ဖြစ်သလို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြရန် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါမေးခွန်းဖြင့် အင်တာဗျူးကို အမြဲတမ်း အဆုံးသတ်ပါ။ ‘ကျွန်တော်/ကျွန်မ မေးသင့်ရဲ့သားနဲ့ မမေးခဲ့မိတဲ့ မေးခွန်းမျိုးရော ရှိသေးလား’ သို့မဟုတ် ‘ထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာများ ရှိဦးမလားခင်ဗျ/ရှင့်။’
အင်တာဗျူးတစ်ခု အပြီးသတ်ချိန်သည် သတင်းရင်းမြစ်အတွက် စိတ်သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်သွားစေသည့်အပြင် သူ့ကိုယ်သူ ဖုံးဖိကာကွယ်ထားမှုတို့ကို လွှတ်ချလိုက်သည့်အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် အင်တာဗျူးအတွင်း ပါဝင်ခဲ့သည့် အသုံးအနှုန်း အခေါ်အဝေါ်များ၊ ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် အမည်များကို အတည်ပြုချက် ရယူပါ။ နောင်အခါ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကို ပိုမိုနားလည် ရှင်းလင်းနိုင်စေရန် ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တို့ကို တောင်းယူပါ။ သင့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် လိပ်စာကတ်တို့ကို ပေးထားခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးပိတ် လောကဝတ်နှုတ်ဆက်စကားပြောရန် မမေ့ပါနှင့်။ အချိန်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါ။ သင့်မေးသမျှ ဘူးခံငြင်းခဲ့လျှင်၊ သင့်ကို စော်ကားပြောဆိုခဲ့လျှင်ပင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခဲ့ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အား စကားပြောဆိုရန် သူတို့ဘက်မှ လိုလားဆန္ဒရှိသည်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ရင်ထဲကပြောနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
အကယ်၍ အင်တာဗျူးကို နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်အတွက် အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် အကျွမ်းတဝင် အင်တာဗျူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါက နောက်ထပ် မည်သူ့ကို မေးမြန်းခြင်းက ပိုကောင်းမည်လဲဟု သူတို့၏ အကြံပြုချက်ကို မေးမြန်းပါ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းက သင့်အတွက် နောက်ထပ်တံခါးပေါက်များကို ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။
သင့်သတင်းကို ထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီ တစ်ကြိမ်ပြန်ပြပါဦးမည်ဟု လွယ်လွယ်သဘောတူပြီး အထုပ်အပိုးပြင်ကာ ထွက်လာဖို့ကို စိတ်စောမနေပါနှင့်။ ခဏနား၍ ထိုသို့တောင်းဆိုမှုမျိုးကို “မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော့်အယ်ဒီတာကို ဆက်သွယ်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွယ်ရင် သူ့ဆီရောက်ပါတယ်” ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်မျိုးကို သင်ပြောတတ်သလို ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ မီဒီယာပါးဝနေသော သတင်းရင်းမြစ်များသည် နောက်ဆုံး ကမန်းကတန်းအချိန်ရောက်မှ ထိုသို့ တောင်းဆိုလာတတ်သည်ကို သတိထားပါ။
အင်တာဗျူးပြီးပြီးချင်း မှတ်စုများပြန် ပြန်လည်စစ်ဆေးရှင်းလင်းပါ
အင်တာဗျူးပြီးစီးသည်နှင့် သင့်မှတ်စုများကို ပြန်ဖတ်ပါ။ ဤအချိန်သည် သင့်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်က အကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်နေသေးသော အချိန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုမှတ်စုများကို နောက်တစ်ရက်အထိ ပစ်ထားလိုက်လျှင် သင့်အတိုကောက် ရေးမှတ်ထားမှုများက ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုပင် မှတ်မိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် မည်သည့်အပိုင်းကို ထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ အရေးကြီးလိုအပ်သည်ကို သိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ သင့်မှတ်စုများကို ပြန်ဖြည့်စွက်ရင်း မည်သည့်နေရာတွင် နောက်ဆက်တွဲအင်တာဗျူး ပြုလုပ်ရမည်ကို ရှာဖွေပါ။